Sagaleen Ameerikaa, har’a, Guraandhala 24, waggaa 79ffaa, yeroo duraaf tamsaasa itti jalqabe ayyaaneffate
Bara dukkanaawaa’ee yeroo waraansa Addunyaa lammaffaa, Mootummaan Yunaayitid Isteetis olola mootummaa Naazii irraa irratti geggeessamu dura dhaabbachuuf, dhaabbata tamsaasaa ofii, kan odeessa dhugaa fi loogii hin qabne tamsaasu qabaachuun barbaachisaa tahuu murteeffate.
Kanaaf jecha, Sagaleen Ameerikaa yokaan VOAn Guraandhala 1, bara 1942 hundeessamee, tamsaasa isaa jalqabaa Afaan Jarmaniitiin, Guraandhala 24 qilleensa irra tamsaase.
Kun Sagalee Ameerikaa irraa dubbatu. Guyyaa guyya guyyaatti yeroo kanatti waa’ee Ameerikaa fi waa’ee waraansaa isinitti himna. Oduun isinitti himnu gaariis hamaas tahuu mala. Garuu, oduu dhugaa isinitti himna – ka jedhu ture, ka tamsaasichi guyyaa sanaa Afaan Jarmaniitiin ittiin jalqabe .
Sagaleen Ameerikaa jalqaba irraa kaasee, jireenya Ameerikaatti foddaa banee, waa’ee jireenya Ameerikaa addunyaa dhageessisuutti fuuleffate. Eyyeen, dhugumatti, Sagaleen Ameerikaa, akka seeraan lafa kaa’ametti, oduu qaabatamaa, kan loogii hin qabnee fi gama hunda hamate dhiheessuu qaba.
Yaadawwanii fi dhaabbatoota Ameerikaa akksumas imaammatoota Yunaayitid Isteetis madaalawaa fi hunda hirmaachiseen tamsaasuu qaba. Ayyaana waggaa 20ffaa hundeeffama VOA ilaalchisuun ka dubbatan prezidaantiin Yunaayitid Isteetis bara sanaa, Joon F. Kenedii, ‘oduu Ameerikaa guutummaa Addunyaatti himuun’ hojii sagalee Ameerikaa ti, jedhanii turan.
Hojiin kun hojii baay’ee ulfaataa fi eeggannaa barbaadu. Gama tokkoon isin harka yokaan qaama mootummaa fi biyyaa ti. Oduu keenya akkaataa itti Dimookiraasii bakka-bu’uun tajaajila kennuu fi Yunaayitid Isteetisiin ifa taasisee dhiheessuun hojjechuun itti gaafatama keessani.
Gama biraatiin ammoo, akka qaama madda bilisummaattii fi qaama bilisummaatti, oduu keenya karaa dhugaa taheen himuuf dirqama qabdan. “Suuraa keenya hanqina keenyaa fi fokkuu keenya, kan ilaalcha jalqabaattti ija namaa hawachuu dhiisuu malu waliin kaasaa, “ jechuudhaan akka Oliiver Kiroomwel dubbate sanatti oduu keenya himaa jedhan – Prezidaant Kenediin.
Kanaaf, uummatni addunyaa irra jiru, Adoolessa 20, bara 1969 ji’arra qubatamuu kan uummatni miliyoona ja’aa fi miliyoona 15 tahu dhaggeeffate dabalatee ennaa gochaaleen guguddoo biyyattii keessaa sagalee Ameerikaa irraa dhaga’e.
Ministiriin Dhimma-alaa Yunaayitid Isteetis, fuula twiterii isaa irratti Guraandhala tokko bara 2021 akka jedhetti, “VOAn tamsaasa guyyaa jalqabaa akkuma dhaggeeffatootatti hime: oduun gaarii yokaan hamaa tahuu mala. Garuu dhugaa jiru sinitti himna’ ka jedhu irraa ka’uudhaan, Raadiyoon Sagalee Ameerikaa hawaasa guutummaa Addunyaa bilisummaa fi dimookiraasii deggeruuf odeessa kennaa, hirmaachisaa fi dhaqqabaa jira” – jechuun, Gulaalaan har’aa ibsa isaa xumura.